Niteraka hetsi-panoherana tany amin’ireo faritry ny anjerimanontolo any Torkia ny fanararaotana sy ny fanorisorenana ara-nofo · Global Voices teny Malagasy
Nanao hetsi-panoherana hisian'ny toerana azo antoka ny mpianatra rehefa nataon'ny manampahefana ambanin-javatra ny miralenta
Voadika ny 24 Avrily 2019 6:21 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Ελληνικά, 日本語, Shqip, Français, Español, русский, Română , English
Sarin'ny mpianatra manao hetsi-panoherana manohitra ny herisetra amin'ny fanavakavahana ara-pananahana tao amin'ny Oniversiten'i Ankara. (Sampan-draharaha Andalou)
Vehivavy iray 23 taona no nambara fa voadaroka sy novetavetain'ny mpampianatra iray 54 taona miasa ao amin'ny Oniversiten'i Ankara tany am-piandohan'ity volana ity raha niasa ho veterinera mpanampy tao amin'ny toeram-pitsaboana ho an'ny biby tsy miankina izay an'ilay mpampianatra izy .
Nanambara ilay tovovavy, ​​izay nataon'ny fampitam-baovao tao an-toerana hoe C.B. ny anarany tao anaty lahatsoratra, tao amin'ny fijoroana vavolombelona nataony fa nanasa azy hisakafo hariva ary nangataka azy hisotro zava-pisotro miaraka aminy ilay mpampianatra antsoina hoe Hasan Bilgili.
Nanazava ny zava-nitranga izy avy eo rehefa nandà ilay fanasana :
Nanery ahy izy ary nanoroka ahy. Nakapokapony teo amin'ny tany in-telo na in-efatra ny lohako . Torana aho. Rehefa nanokatra ny masoko aho dia efa tamin'ny 1.30 maraina ny ora.
Ilay mpiara-miasa amin'i Bilgili, veterinera mpandidy biby antsoina hoe Serkan Durmaz no olona voalohany hitan'ity tovovavy ity rehefa nahatsiaro izy.
Hoy izy taminy:
Nisy zavatra nitranga teo aminao sy izy. Aza mitaraina fa hahita olana amin'izany zavatra izany ianao.
Nanome hafatra nitovitovy tamin'izany ilay mpitsabo antsoina hoe Huseyin Senyurt izay nalain'i Bilgili sy Durmaz hijery azy:
Tsy hisy zavatra hitranga na dia mitaraina aza ianao. Hano fotsiny aloha ity fanafody ity.
Nosamborina i Hasan Bilgili taorian'ny nitorian'i C.B. azy.
Nilaza ity fitarainana ity ho firaisana tsikombakomba hamelezana azy izy rehefa nijoro teo alohan'ny fitsarana ary nilaza ny satany amin'ny maha-lehilahy manambady azy ho fiarovan-tenany.
Namoaka fanambarana tao amin'ny Twitter ny Oniversiten'i Ankara:
Navoaka ny vaovao momba ny herisetra ara-nofo nitranga tany amin'ny toeram-pitsaboana biby iray tsy miankina any ivelan'ny oniversite ary efa natomboka ny fanadihadiana ho an'ilay lazaina fa nahavanon-doza. Efa naato ilay olona voalaza etsy ambony.
Tsy vao voalohany
Efa voampanga ho nampijaly vehivavy maro i Hasan Bilgili teo aloha.
Araka ny tatitry avy amin'ny gazetiboky Hürriyet, samy voampanga tamin'ny fanararaotana vehivavy mpianatra tamin'ny taona 2007 i Hasan Bilgili sy i Ali Bilgili rahalahiny, izay mpampianatra momba ny fivarotam-panafody tao amin'io oniversite io ihany, ary niatrika fitsarana vokatr'izany.
Nanome baiko ny mpitsara mba hampiatoana an'i Ali Bilgili tamin'ny asany tao amin'ny oniversite noho ny fiampangàna, raha nohazonina kosa ny karaman'i Hasan Bilgili. Samy niverina tamin'ny asany izy ireo tatỳ aoriana.
Vao haingana, tamin'ny taona 2016 no lasibatry ny fiampangana tamin'ny fanararaotana ara-nofo i Hasan Bilgili ary mpianatra avy amin'ny oniversite hafa nanaovana fifanakalozana nianatra tao amin'ny departemantan'ny mpitsabo biby no nitory azy tamin'ity indray mitoraka ity.
Ny fihetsiketsehana nataon'ny mpianatra: Tsy hangina izahay
Nanomboka nanao hetsi-panoherana tany amin'ny faritry ny anjerimanontolo ny mpianatra tao amin'ny Oniversite Ankara ny andro taorian'ny nampalaza ilay trangana fanolanana tao amin'ny Twitter izay nikendry ny tsy firaharahian'ireo manampahefana tamin'ny fitarainana momba ny fanararaotana ara-nofo teo aloha.
Nihirahira hoe “tsy mila mpampianatra mpanolana izahay” ny mpianatra nandritra ny fihetsiketsehana.
Nahitana akony tao amin'ny tambajotra sosialy ny hetsi-panoherana.
Hoy ny mpianatra hoe: “Midika ho fandraisana anjara amin'ny heloka ny fahanginana.”
Nanao hetsi-panoherana ary namoaka fanambarana an-gazety ny mpianatry ny Oniversite Ankara avy amin'ny Sampam-pampianarana Fitsaboana Biby taorian'ny nanolanan'i Dr. Hasan Bilgili, mpampianatra iray ao amin'ny Oniversite Ankara ao amin'ny Sampam-pampianarana Fitsaboana Biby, an'i B.C., izay niasa tao amin'ny toeram-pitsaboana biby.
Nahemotra ny miralenta
Lohahevitra tena saropady ny herisetra ara-nofo any Torkia hatramin'ny nialan'ny Filankevitry ny Fampianarana Ambony (YÖK) izay niteraka resabe tamin'ny fanolorantenany ny volana Febroary tamin'ny ‘Diplaoman'ny Toe-tsain'ny Miralenta‘, antontan-taratasy izay manery izany hampihatra ny fitsipiky ny miralenta amin'ny asany.
Nilaza ny lanjan'ity antontan-taratasy ity ho “tsy mendrika ho an'ny soatoavintsika” ny filohan'ny mpandrindra ny fampianarana ambony noho ny antony fialan'izy ireo .
Nilaza tamin'ny Global Voices ny Oniversite ho an'ny Fiombonan'ny Vehivavy, vondrona iray naorin'ny mpianatra vehivavy tamin'ny taona 2007 fa lasa nanjary toerana natahoran'ny vehivavy maro hatrany ny faritry ny anjerimanontolo Tiorka.
“Nifampilaza ireo mpianatra ao amin'ny sampam-pampianarana mba tsy hiditra ny efitranon'ny mpampianatra irery,” hoy ny mpitondratenin'ny vondrona tamin'ny GV tamin'ny alàlan'ny finday.
Mpampianatra ao amin'ny oniversite iray ihany izy mirahalahy. Tsy tranga tokana no hanenjehana azy ireo. Niara-niaina tamin'ireo mpianatra izy ireo nandritra ny taona maro raha tsy voasazy ary mbola manohy ny asa ratsiny ihany .
Ampy izay. Sazio ireo mpanao heloka .
Nampanantena ny hanohy ny fanadihadiana momba ny fitarainana ary mikasa ny hitondra ny raharaha any amin'ny fitsarana ny Vondrona Manohitra ny Herisetra Ara-nofo ao amin'ny Oniversite Ankara izay natsangana tamin'ny taona 2011 taorian'ny fitombon'ny trangana fanararaotana ara-nofo tao amin'ny oniversite .
Saingy milaza i Gülriz Uygur, mpampianatra lalàna ao amin'ny oniversite sady mpandrindra ny vondrona fa matetika no noterena hangina ireo olona niharan'ny herisetra.
“Tsy afaka mitaraina aminay momba ny fanararaotana ara-nofo izay atrehany ny mpianatra satria norahonana tamin'ny naoty izy ireo ka matahotra “, hoy i Uygur tamin'ny gazety Hurriyet.
Tsy voafetra tao an-drenivohitra ihany ny fiampangana ara-nofo tany amin'ny toeram-pampianarana ambony any Tiorkia tamin'ity taona ity.
Nandalo tantara ratsy goavana tamin'ny volana Martsa ny Oniversite Koç, Oniveriste tsy miankina iray ao Istanbul, tanàna lehibe indrindra ao amin'ny firenena rehefa tsy nahazo sazy afatsy ny fampiatoana nandritra ny telo volana ny mpianatra lehilahy iray voampanga ho nanararaotra ara-nofo tamin'ny vehivavy mpiara-mianatra aminy.
Manafina ny herisetra sy ny fanararaotana ny Oniversite Koç. Tsy voaaro izahay ato amin'ny faritry ny anjerimanontolo.
Tamin'io volana io ihany, nanao hetsi-panoherana manohitra ny lehiben'ny sampam-pampianarana Sosialolojia, Profesora İbrahim Kaya, ireo mpianatra avy ao amin'ny Oniversite Dokuz Eylul ao Izmir, tanàndehibe fahatelo lehibe indrindra ao amin'ny firenena, noho ny filazan'izy ireo azy ho tsy nitsahatra nanararaotra ara-nofo ireo vehivavy mpianatra nanomboka tamin'ny taona 2014.
Nametaka teny filamatra toy ny hoe “Tsy mila mpampianatra mpanararaotra izahay” teny amin'ny rindrin'ny toeram-pianarana ireo vehivavy mpianatra. Manomana ny fiampangana an'i Kaya tamin'ny heloka bevava izy ireo ankehitriny .
Fitantanam-pitondrana 3 andro izay